नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सक आन्दोलनमा, डाक्टरमाथिको हातपातको फुटेज हटाएको आरोप – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १६ गते १३:१४
डाक्टरलाई हातपात गरेको विरोधमा नेपाल मेडिकल कलेज (जोरपाटी) का चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
१४ जेठमा ६४ वर्षीया महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। डाक्टरमाथि हातपात गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गर्दै चिकित्सकहरू कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलमा उत्रिएका छन्।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकले लापबाही गरेको भन्दे मृतकका आफन्तले डाक्टरमाथी हातपात गरेका थिए।
अस्पताल प्रशासन कुटपिट गर्नेको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। दोषीलाई उम्काउन कुटपिट घटनाको सिटिटिभी फुटेज हटाइएको आवासीय चिकित्सक डा.गुन्जन खड्काले आरोप लगाए।
‘प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेका छौं। प्रमाणको लागि कुटपिटमा संलग्न भएका मानिसको लिएर सिसिटिभी फुटेज लिन गएका थियौं’, डा खड्काले भने, ‘घटना भएको वरिपरिको एक घण्टाको फुटेज पाइएन।’
फुटेज लुकाउनुमा प्रशासनका मानिसको हात रहेको उनले दाबी गरे। प्रशासनले प्लक छुटेको, विग्रेको भनेर दोषीलाई उम्काउन खोजेको डा. खड्काले बताए।
अस्पतालको आकस्मिक सेवा र फिभर क्लिनकबाहेक अन्य सेवा ठप्प गरी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ७२ घण्टाभित्र सिसिटीभी फुटेज ननिकालिए र दोषीलाई कारबाही नगरिए प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने डा. खड्ले चेतावनी दिए।
‘प्राविधिकसँग सोध्दा कसैले डिलिट गरेको बताएका छन्’, डा. खड्काले भने, ‘प्रशासनले हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा दोषीको साइट लिएर हामीलाई धोका दिएको छ।’
अस्पताल प्रशासनबाट नै धोका दिँदा चिकित्सकको मनोबल घटेको छ। ‘अभिवाक जस्तो अस्पताल प्रशासनले नै सर्पोट नगर्ने भएपछि कुन आधारमा सुरक्षित छौं भनेर काम गर्ने?’, उनले प्रश्न गरे।
कोभिड – १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको क्रममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपनि पटक–पटक डाक्टरहरूमाथी दुव्र्यवहार हुँदै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथी कुटपिटको घटनालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको ध्यानकार्षणसमेत गराएको छ।
संघले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेको छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथी भएको शारीरिक हमला संलग्न दोषीलाई तत्काल हिरासदमा लिई छानबिन गर्नु पर्ने माग राखेको छ।